I-Arduino IDE 2.0 (beta): isimemezelo esisemthethweni sendawo entsha yentuthuko | Kusuka kuLinux
I-Arduino IDE 2.0 (beta): isimemezelo esisemthethweni sendawo entsha yentuthuko
Isaka | | Aplicaciones, Ukuhlela
Njengokwazi kwakho, I-Arduino IDE yindawo ehlanganisiwe yentuthuko ye-Arduino namanye amabhodi ahambisanayo. Ngalesi simo, uzokwazi ukubhala imidwebo yakho bese uyidlulisela epuletini ukuze uqale ukusebenza nale nkundla yokuthuthuka edume kakhulu phakathi kwabafundi nabenzi.
I-Arduino IDE, yize kungabonakala, iyaqhubeka nokuthuthuka ukwenza ngcono le ndawo kusukela lapho izoqala emuva ngo-2005. Kusukela lapho, zombili izinto ezingabonakali kumsebenzisi zishintshiwe, kanye nezinye izinto mayelana nesibonisi sokuqhafaza ukwenza ukuhlela amabhodi kube mnandi kakhulu.
Njengamanje, lokhu imvelo iguquguquka kakhulu, esekela amapulatifomu ahlukahlukene, phakathi kwawo okuyiLinux, kanye nokutholakala ngezilimi ezahlukahlukene ezingama-66, njengeSpanish, nangokuxhaswa amabhodi asemthethweni angavumelekile ayi-1000. Ngaphezu kwalokho, inezinkulungwane zezincwadi ezingasiza, nokulandwa okungaphezu kwezigidi ezingama-39 ngonyaka odlule.
Yini okusha in Arduino IDE 2.0 Beta
Kepha konke lokho bekungaba umlando nje ukube bekungekhona ukunethezeka okuphetheyo intuthuko yayo iyaqhubeka ukusebenza ngokungapheli ukwenza le software ibe ngcono nakakhulu. Ubufakazi balokhu isimemezelo samanje se-Arduino IDE 2.0, esivele iqala "ukuvuna ikhanda", noma ngabe kusenguhlobo lweBetaizame lapha).
Kule nguqulo entsha ye-Arduino IDE kunezindaba ezithokozisayo ezizogcina zingenile inguqulo yokugcina, yize le nguqulo yokuhlola isenezinto ezithile okufanele ipholisiswe futhi inganikeza ezinye izinkinga ezizolungiswa ukukhishwa kokugcina.
Phakathi kwezinto ezintsha, bangagqamisa imisebenzi ethuthukile ezovela kule nguqulo. I-Arduino IDE iyaqhubeka nokugcina i-interface yayo ilula, kubasebenzisi be-novice, kepha manje izofaka izici ezintsha ezithuthukile. Isibonelo, i- phila ukulungisa iphutha, okungukuthi, ukukwazi ukwenza ikhodi ebhodini elinamathiselwe bese ulimisa kulayini othize ukuze ubone okuqukethwe kokuguquguqukayo, inkumbulo, amarejista, njll., futhi ukwazi ukuthola izinkinga.
Ngakolunye uhlangothi, kufaka phakathi i- umhleli wanamuhla, ukuhlinzeka ngomuzwa ongcono womsebenzisi ngenxa yesixhumi esibonakalayo esiphendulayo, izinqamuleli zokuzulazula, ukuqedela ngokuzenzakalela ukuphakamisa okuguquguqukayo, imisebenzi, njll., nokuhlanganiswa okusheshayo. Ukuqephuza okungaphezulu nakule nguqulo ye-Arduino IDE 2.0 Beta.
Futhi uma lokho kungenele, ukulungisa iphutha bukhoma kusekela konke amabhodi we-arduino nalabo abasuselwa ku-SAMD naku-Mbed. Vele, abagcini bekhodi nabo bavulekele amabhodi wezinkampani zangaphandle ukwengeza ukusekelwa kwamanye amabhodi.
El IDE entsha kusekelwe kuhlaka lwe-Eclipse Theia, nalo olususelwa ekwakhiweni okufanayo ne-VS Code, ngenkathi ingaphambili libhalwa ngeTypeScript, futhi iningi langemuva manje selibhalwe eGolang.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Arduino IDE 2.0 (beta): isimemezelo esisemthethweni sendawo entsha yentuthuko
Bopha i-DNS manje inokusekelwa kokuhlola kwe-DNS ngaphezulu kwe-HTTPS